'देह व्यापारमा लगाउन छिटो बढ्ने औषधि' - TV Annapurna
किशोरीभन्दा बालिकालाई सीमा कटाउन सजिलो हुने भएपछि मानवतस्करहरूले बालिकाहरूलाई लक्षित गरेको हुनसक्ने मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गरिरहेकाहरू बताउँछन्। प्रहरीले चाहिँ नेपालभित्र यस्तो घटनामा परेको भनी हालसम्म उजुरी नपरेको बताएको छ। शरीर ठूलो देखियोस् भन्ने उद्देश्यले आफूहरूलाई ग्रोथ हर्मोन लगायतका औषधि दिइएको कतिपय पीडित नेपाली किशोरीले पुष्टि गरेका छन्।
त्यस्तै मध्येकी एक किशोरीले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, “मलाई दिनको दुई पटक लामो लामो रातो चक्की ‌औषधि खान दिइन्थ्यो। त्यो खादाँ मलाई बान्ता आउँथ्यो।” “सकेसम्म खान नपरोस् जस्तो लाग्थ्यो। तर खाएन भने गाली गर्थे, कुट्थ्ये र उनीहरूले नै खुवाइ दिन्थे। त्यो खायो भने छिट्टै ठूलो हुन्छौ र घर जान पाउँछौ भन्थे उनीहरूले।” उनी आठ वर्षकी हुदाँ पढ्नका लागि काठमाण्डौ आएकी थिइन्।
एक महिलाले छोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने भनी आश्वस्त पारेपछि आठ सन्तानमध्येकी एक उनलाई अभिभावकले ती महिलाको जिम्मेवारीमा पठाइदिएको उनले बताइन्।
तर काठमाण्डौबाट भारतको एउटा शरहमा एउटा नेपाली परिवारसँग राखियो। जहाँ ती बालिकाले घरधन्दा गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँ बसेको करिब दुई वर्षपछि उनलाई अर्को शहरमा पुर्‍याइएको उनी बताउँछन्।
“किशोरीहरूमाथि निगरानी भइरहेको समयमा साना बालिकालाई लिएर नाका पारि जान सजिलो भयो। कसैले सोध्यो भने मेरै बच्चा हो भने भइहाल्यो, सजिलो हुन्छ।”
बालिकाहरूलाई राम्रो विद्यालयमा पढाइदिने प्रलोभन देखाएर लैजाने र पछि बेच्ने गरेको पाइएको खड्काले बताए।
भारतमा रहँदा एउटी बालिकालाई समयभन्दा अघिनै किशोरी बनाएको देखेको अनुभव बेचबिखनविरुद्ध सक्रिय शक्ति समूहकी कार्यकारी निर्देशक सुनिता दुनुवारको पनि छ।
उनी भन्छिन्, “म भारतमा समस्यामा परेको बेला म परेकै ठाउँमा एक ९ वर्षको बालिका ल्याएको थियो। त्यसपछि ऊ दुई महिना जति गायब भयो।”
“ऊ फर्किँदा मैले उसलाई चिन्न सकिनँ। मान्छै हलक्कै बढेर आएको थियो। तर बोली चाहिँ एकदम सानो थियो।”
यस्ता औषधि सुईमार्फत दिने गरेको भेटिएको र यसको थुप्रै नकारात्मक असर हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्, “यस्ता औषधिले बालिकाको शरीर किशोरीको जस्तो बनाइदिन्छ। यसले जीवनभरि नराम्रो असर पार्छ। विशेषगरी पाठेघरमा असर गर्छ अनि हड्डीमा पनि समस्या आउनसक्छ।”
पछिल्लो समय मानव बेचबिखन बढेको प्रहरीको आँकडाले देखाउँछ। २०७१/ ७२ सालमा बेचबिखनसम्बन्धी १८१ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए।त्यो बढेर २०७२/७३ त्यो संख्या २१२ रहेको मा २०७३/७४ २२७ र २०७४/७५मा २५० भन्दा बढी पुगेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। पीडितमध्ये करिब ८० प्रतिशत महिला छन्।
“साना बालिकाहरूलाई यस किसिमका ‍औषधि सेवन गराएर देह व्यपारमा लगाएको भन्ने उजुरी हामी कहाँ अहिलेसम्म परेको छैन।” मानव तस्करीको स्वरुप बदलिँदै गएको र यसलाई रोक्न सरकारी निकाय सजग हुनुपर्ने अभियानकर्मीहरू बताउँछन्।
यसका लागि बलियो कानून बनाउनुका साथै प्रभावकारी चेतनामूलक कार्यक्रम चलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
जुम्लामा प्रहरी धरपकड, अस्पतालमै कुटिए केसीका समर्थक
प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउन खोज्ने दर्जनौँ विद्यार्थी पक्राउ
बिशेष सबैभन्दा बढि हेरिएका भिडियोसहितका समाचार
बिशेष सबैभन्दा बढि हेरिएका भिडियोसहितका समाचार समाचार
के तपाईँको स्मार्टफोन तात्छ ? यसो गर्नुहोस्
अहिले विश्वभरमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने डिभाइस स्मार्टफोन हो। अत्यधिक स्मार्टफोन प्रयोग गर्दा स्मार्टफोनहरु तातो हुने...
यौन सम्पर्क पछि प्रेमिलाई जिउँदै जलाउँथिन् यी रानी
इतिहासका पुस्तक पढ्ने हो भने अफ्रिकी मुलुक अंगोलाकी रानी एनजिंगा एमबांदी बहादुर तथा तेज मस्तिष्क भएकी...
June 01, 2018 TV-Annapurna 0
सुन तस्करीको स्टिङ अपरेशनका गएका पत्रकार ६ घण्टा थुनिएर निस्कँदा
राजु सुवेदी २०७४ जेठ १६ गते राति टिभी अन्नपूर्णको फेसबुक पेजमा एक व्यक्तिले मेसेज पठाए ।...
June 01, 2018 Annapurna TV 0
स्वस्थ बच्चा जन्माउन के खानुपर्छ जानीराख्नुहोस्
स्वस्थ बच्चाको जन्म होस् भन्ने चाहना हरेक गर्भवतीलाई हुन्छ । यसका लागि गर्भावस्थाका दौरान पर्याप्त मात्रामा...
नेपालमा असामयिक मृत्यु हुने १० कारणहरु
नेपालमा विगत एक दशकमा मुटुको धमनी साँघुरिएर अक्सिजन कम हुने समस्या, विभिन्न सरुवा रोग, आमा एवम्...
फ्रान्समा सन् २०१६ को तुलनामा सन् २०१७ मा दश लाख मानिसहरूले धूम्रपान नगर्ने गरेको देखिएको छ।...
प्रेममा पागल भएकि युवतीले गरिन एक बर्षमा ६५ हजार म्यासेज
फाईल तस्विर प्रेममा मानिसहरु पागल हुन्छन् भन्ने भनार्इ पुरानै हो । तर कतिसम्म पागल हुन्छन् भन्ने...
दैनिक अण्डा खानुहुन्छ कि हुँदैन ? जानीराख्नुहोस्
अण्डा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । तर एकदिनमा कति अण्डा खानुपर्छ र पकाउने सही तरिका के...
सन् १९९४ को विश्वकप अमेरिकामा आयोजना भएको थियो । उक्त विश्वकपमा कोलम्बिया समूह ‘ए’ मा परेको...
जनमैत्री हस्पिटलका सुरक्षा गार्डको रोदन भात खानकै लागि कति चौकी धाउनु
राज कुमार विष्ट । काठमाण्डौँ। काठमाण्डौँको बालाजुमा रहेको जनमैत्री अस्पताल व्यवस्थापनको लापरबाहीले विजोग भएको छ।...
विश्वका १० सिईओ जसको तलब १ करोड डलर भन्दा बढि छ
यसरी हुन्छ उपभोक्ता समिति मार्फत राज्यको ढुकटी दोहन
राज कुमार बिष्ट/काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका बडा नं ३५ मा रहेको एस ओ एस मार्ग निर्माणको क्रममा...
राजधानीमा बर्डफ्लु भेटियो, सर्तक रहन पशु सेवा बिभागको आग्रह
राजधानीमा नै बर्डफ्लुको संक्रमण देखिएपछि संत्रास फैलिएको छ । राजधानीको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको २ वटा पोल्टी...
इटालियन फिल्मस्टार आसिया २१ वर्षकी हुँदा बलात्कृत भएको खुलासा
कान्स फिल्म फेस्टिभल–२०१८’ समापन भइसकेको छ । संसारकै ठूलो मानिने यस फिल्म फेस्टिभलमा हलिउडदेखि बलिउडसम्मका सेलेब्रिटीको...
May 16, 2018 TV-Annapurna 0
चकलेट पोखिँदा राजमार्ग नै अवरुद्ध
सडकमा छताछुल्ल पोखिएको चकलेट व्यवस्थापन गर्न राजमार्ग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ...
May 16, 2018 Annapurna TV 0
कंगोमा इबोलाको संक्रमण देखियो, नेपालमा सावधानी अपनाउन आग्रह
पश्चिम अफ्रिकी मुलुक कंगोमा इबोला भाइरसको संक्रमण देखिएपछि नेपालमा सतर्कता अपनाइएको छ । शान्ति स्थापनार्थ नेपाली सेना...